Muchinguri appointed acting president as Mnangagwa visits South Africa – Nehanda Radio
Muchinguri appointed acting president as Mnangagwa visits South Africa
By Nehanda Radio	 On Dec 21, 2017 62,261
A cabinet minister was named acting president as Zimbabwe’s Emmerson Mnangagwa left for South Africa on a working visit.
Yet to appoint his two deputies, Mnangagwa on Thursday left Minister of Environment, Water and Climate Oppah Muchinguri-Kashiri as acting president.
Muchinguri-Kashiri is currently the most senior member of the ruling Zanu-PF’s Politburo where she was recently appointed national chairperson.
This is Mnangagwa’s first visit outside the country as head of state following his inauguration in November when he took over from former President Robert Mugabe.
War veterans plan to pass vote of no confidence in VP…
Dec 6, 2021 58,395
ED admits economic crisis, pays tribute to ‘patriotic,…
Dec 3, 2021 37,421
Mnangagwa accuses teachers unions of conspiring with British…
Dec 2, 2021 45,081
Minister Mhona appoints 9 more board members for 5 Transport…
Dec 2, 2021 20,475
He is expected to hold talks with President Jacob Zuma and attend a business conference to be hosted by the Zimbabwean embassy in South Africa.
The South African government said the two presidents would discuss various bilateral issues.
“During the courtesy call, the two heads of state will share perspectives on various issues of mutual importance, such as regional, continental and international developments,” the South African Presidency said.
South Africa is Zimbabwe’s biggest trading partner and the two countries have signed over 40 cooperation agreements under their Bi-National Commission early this year. Xinhua
Emmerson MnangagwaOppah Muchinguri-Kashiri
Nehanda Radio 35103 posts
Angry AFM members protest extension of Madziyire leadership…… 19 years in charge, wants MORE
Mnangagwa makes first foreign trip to South Africa… says ‘fixated on reviving Zim economy’
War veterans plan to pass vote of no confidence in VP Chiwenga
ED admits economic crisis, pays tribute to ‘patriotic, patient’ workers
Mnangagwa accuses teachers unions of conspiring with British govt
Minister Mhona appoints 9 more board members for 5 Transport Ministry parastatals
Mnangagwa sets by-elections for March, confident of ‘landslide victory’
Zimbabwe orders 14-day travel quarantine to curb Omicron cases
I had no reason to suspect Mubaiwa was lying: Justice…
Dec 7, 2021 58,297
Benjani set for another dance as Zim Warriors assistant…
Dec 7, 2021 24,731
Keen Mushapaidze and model Panashe Peters tie the knot
Dec 6, 2021 41,755
Chinese firm yet to start airport job 7 months after winning…
Dec 6, 2021 26,750
Gambia elections: Adama Barrow declared presidential…
Dec 6, 2021 15,868
In Dewa Mavhinga ‘we have lost a gentle, honest,…
Dec 6, 2021 60,443
Chamisa ‘gutted’ by death of ‘solid…
Dec 6, 2021 42,207
Hopewell Chin’ono acquitted as judge exposes state…
Dec 6, 2021 28,369